Hiran State - News: HS:- Madaxweynah Soomaaliya oo Mogdihsu lagu soo dhaweeyey
HS:- Madaxweynah Soomaaliya oo Mogdihsu lagu soo dhaweeyey
HS:- Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Shariif Sh Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, ayadoo si heer sare ah ay u soo dhaweeyeen masuuliyiin ka tirsan dowladda iyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa garoonka aden cade ka soo dagay xili casir ah halkaasi oo ay iskugu soo baxeen tiradii ugu badneyd ee soo dhaweysa hogaamiye Soomaaliyeed tan iyo waxii ka danbeeyey 1990 oo ah xiligii ay bur burtay dowladii dhexe.
Kumanaan dadweyne ah ayaa isugu soo baxay waddada Maka Al-Mukarama, kuwaas oo sitay Sawirka madaxweynaha, boorar waaweyn iyo dhar lagu sawiray muuqaalka iyo magaca madaxweynaha Soomaaliya. Sidoo kale dad kor u dhaafay dhawr boqol ayaa madaxweynuhu ku gacan qaaday garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde xili siweyn looga daremayey madaxweynaha farxad.
Madaxweyne Shariif oo sida laga dareemayey garoonka diyaaradaha soo dhaweyntiisa siweyn looga shaqeeyey ayaa Shir jaraa’id oo uu ku qabtay Garoonka diyaaradaha ugu warbixiyay qaar ka mid ah masuuliyiinta dowlada ee kusoo dhaweysay halkaas kulankii uu la yeeshay xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Hellery Clinton,Wuxuuna sheegay in Mareykanku ay Soomaaliya ugu hambalyeeyeen horumarka ay ka sameysay dhinacyada siyaasadda, Ammaanka iyo bani’aadamnimada.
“Hellery waxaan ka wada hadalnay horumarka la gaaray iyo sida ay tahay in loo sii xoojiyo, dhinaca amniga dhinaca siyaasadda, dhinaca bani’aadamnimada iyo dhinaca arrimaha bulshada iyo Soomaaliya inay 20 sano kaddib ay noqtay meel nabad ah, arrintaasna Mareykanku aad bay u taageereen” ayuu yiri madaxweyne Shiikh Shariif.
Madaxweynaha ayaa intaa ku daray in saxiixayaasha Roadmap-ku ay kulan kale ku leeyihiin, magaalada Nairobi, kaas oo looga hadlayo dhammeystirka howsha qabyada ah. Wuxuuna ka tacsiyeeyay dilkii loo geystay agaasimihii garoonka diyaaradaha oo kooxo hubeysan ay xalay ku toogteen magaalada Muqdisho.
Masuuliyiinta dowladda ee soo dhaweeyay madaxweynaha waxaa ka mid ah, ku simaha r/wasaaraha ahna wasiirka difaaca Xuseen Carab Ciise, wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane C/raxiin Cabdi Abiikar, gudoomiyha gobolka Banaadir, Xilldhibaano iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. ugu danbeyna waxaa madaxweynaha iyo waftigiisa lagu qaaday gawaarida gaashaaman iyo kuwa raaxada oo u galbiyey xarunta uu ka degan yahay magaalada Mogdishu ee Villa Soomaaliya.
· admin on August 05 2012 15:06:20 · 0 Comments · 2749 Reads ·
14,606,183 unique visits